Ihhotela "Anastasia", Cyprus: i Uhlolojikelele, amakamelo kanye Beach Izibuyekezo
Cyprus - hhayi iyindawo ethandwa kakhulu phakathi izivakashi Russian. Abaningi bakhetha zokungcebeleka eshibhile eGreece, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Cyprus has ukunambitheka yayo ngesimo amabhishi ahlanzekile, izinhlelo uhambo ocebile futhi service quality. I ethile kuphela maqembu lapha, mhlawumbe, kungaba nezindleko zazo eziphakeme. Noma kunjalo, uma namanje unquma ukuya eholidini esiqhingini ke bheka ehhotela in Cyprus "Anastasia Beach 4 *".
Imininingwane Area "Anastasia"
Isakhiwo Itholakala mpumalanga esiqhingini saseKhupro, endaweni izivakashi emzaneni Protaras. Le ndawo idume amabhishi elizungezile kuhlanzekile anesihlabathi coves encane enamadwala. Le ndawo ikude resort Clubbing saseKhupro, ngakho-ke ilungele abathandi iholidi ethule nomkhaya wakhe. Futhi, amanani aphansi kunakwezinye izindawo zokungcebeleka endaweni engenabantu kulesi siqhingi. Kulokhu, umuzi eduze nightlife odumile Cyprus - Ayia Napa.
Ihhotela ngokwalo "Anastasia" (Cyprus) yakhiwe kwesokudla ogwini Marlita. Ukuze Protaras isikhungo sekunje imizuzu engu-15 kuphela. Sandy beach itholakala kwamamitha angu-200 ukusuka kulelo hhotela, ngakho endleleni eya kuzothatha amandla 5-10 emaminithi. Ungathola lapha kusukela eliseduze sezindiza, "Larnaca", okuyinto 65 amakhilomitha away. A uhambo ngemoto emigwaqweni bushelelezi ngeke kuthathe ngaphezu kwehora. 1 ikhilomitha kude kuyinto amatshe lolwandle Kalamies. abathandi nokuzwa beyoba into ukubona. Isigodlo itholakala 5 angu-Agia Napa, kanye "Cavo yamaGreki" National Park. Izivakashi nezingane kufanele uvakashele aquarium olwandle Protaras, elise angu-3 kusukela ehhotela.
"Anastasia" lakhiwa 1998 lapho kwakhiwa indawo ye Protaras. Hard ukukholelwa, kodwa nje emashumini eminyaka ambalwa edlule lapho wawusegunjini ihlathi virgin, lapho kwakukhona kuphela amasundu nezihlahla. Ihhotela "Anastasia" (Cyprus) has a isakhiwo esikhulu emine storeyed, okuyinto iyisonto cishe 200 amakamelo. Kumele kukhunjulwe ukuthi izisebenzi ehhotela ukhuluma kuphela NgesiNgisi nangesiGreki, ngakho lapho kungaba nezinkinga ukuqonda zezivakashi okhuluma isiRashiya.
Ukuze izivakashi ayatholakala ikakhulukazi multi-embhedeni amakamelo. Ihhotela yakhelwe amaholide umndeni, ngakho lapha kuvumeleke izingane yanoma yimuphi yobudala. Futhi izilwane ngokuphambene akuzona wamukelekile. ukubekwa yabo akuvunyelwe nhlobo, ngisho for imali eyengeziwe. Ngena e- uqala ehhotela ngo 14:00 nesikhathi sendawo. Kulokhu, izivakashi ngokuvamile hlala lokubhukuda ehhotela elaliseduze for 1-2 izinsuku. Kuxoshwa kwenzeka kungakadluli emini. Kuyinto ikakhulukazi a British ukuphumula, nabasePoland, amaJalimane, amaGreki, kodwa izivakashi Russian azisenzeki kaningi.
Amagumbi futhi imishini
Lesi sakhiwo esikhulu itholakala 190 amakamelo. Phakathi kwabo kukhona amakamelo emndenini, nezindawo zokuhlala for abasanda kushada. Igumbi ngamunye soundproofed kusuka kwenye, ngakho izivakashi ngeke ngisho ukuzwa nomakhelwane bayo umsindo kakhulu. Amakamelo wenza, ukulungiswa ezinhle yesimanje, yakhelwe isitayela classic. Bonke babe ivulekile balcony banikwa, futhi abanye babe ithala abo. Nokho, i-Windows advantageously sise kolwandle, ukuba kwakhiwe futhi endaweni ezungezile, futhi epaki amanzi.
Ihhotela "Anastasia" (Cyprus) inikeza uxhaxha Izinsiza ukuqinisekisa ukuhlala ukhululekile emakamelweni. Sibala kwamasonto ayinhloko:
Lokugezela elineshawa. Ihhotela likuvumela imikhiqizo ukunakekelwa siqu, umshini wokomisa izinwele kanye amathawula, bathrobes futhi Slippers.
Satellite TV. Kuye izinombolo zingavela onobuhle flat futhi zanamuhla, futhi isibani ubudala. Izivakashi nazo zithole umsakazo.
ikhishi elincane: efrijini, iketela, ikhofi umenzi, izitsha. Futhi egumbini has a mini-bar, okuyinto ikhokhwe okuqukethwe.
A ephephile amancane electronic ukugcina imibhalo nezinto eziyigugu.
Qondisa ukudayela yocingo ngokuxhumana nge reception noma izingcingo zomhlaba jikelele.
Ngamunye elawulwa air conditioning.
Ezokudla at "Anastasia"
ukudla okunempilo ingase ikumangaze Cyprus. Ihhotela "Anastasia Beach" unikeza service "zonke okufakayo". Izivakashi abathenga ke, ungadla ngaphandle kwemingcele esizeni, kanye ukuthola iziphuzo khulula, okufaka utshwala. Nokho, ayihlanganisi ibhulakufesi, ngakho ngaye kuyodingeka bakhokhe ngokwehlukile. Ekuseni kwasekuseni zakudala English: amaqanda ngiyocasha, itiye, ehla, ngiyocasha amaqanda, tinhlobo letehlukene okusanhlamvu. Ntambama nakusihlwa, ukhonza cuisine isiGreki European. On the table siyohlale inyama eningi izinhlanzi. Izithelo nemifino nazo babekhonza compulsorily. Njengoba for iziphuzo, izivakashi uphiwa amanzi elikhazimulayo nokumbiwa, ayo, 4 besizulu, iwayini obomvu nomhlophe kanye nemimoya. On isicelo, amamenyu wezokudla noma zezingane kungenziwa ihlanganiswe.
On indawo nsuku zonke avulekele zokudlela elandelayo nemigoqo:
ibha "bambiza ngokuthi uHermesi";
I izivakashi eziyinkimbinkimbi ungathola konke ungase udinge ukuhlala ekhululekile esiqhingini saseKhupro (Protaras). Ihhotela "Anastasia 4 *" inikeza athuthukile ingqalasizinda. Cabanga ayinhloko:
Business Center, inikeza izivakashi ngefeksi kanye nezinsizakalo amakhophi. Okwemicimbi esemthethweni kukhona igumbi umhlangano wangasese. I-Centre lucwaningo ikhokhwe yokudiliva.
internet Wireless ikhokhwe. Izindleko ukusetshenziswa olulodwa - 10 euro.
Mahhala yokupaka yangasese. Ikhamera inikeza isitoreji umthwalo edilini lomshado.
Lwemali umzimba, okuvumela ukuguqula ruble ku-euro ngesilinganiso evumayo kakhulu.
Dry yokuhlanza nelondolo amasevisi sipho ilondolo, ayina izingubo. Kukhona cindezela trouser.
ikheshi Modern, inkonzo mnyango. Ihhotela has zonke Izinsiza sokuzilibazisa zabantu abakhubazekile.
Ihhovisi likadokotela, okuyinto zizodingida khulula hotel izivakashi, uma noma iyiphi azizwe engelutho.
izivakashi ezokungcebeleka Inhlangano
"Anastasia" - Ihhotela (Cyprus, Protaras), ukuthi angaletha izivakashi zayo uhlu ukuzijabulisa: nenyama yabo bonke abakhululekileyo ikhokhwe. Sibala abathandekayo ezithakazelisayo kakhulu:
Eziningana okubhukuda: kokubili ovulekile futhi ivaliwe. Ezinye zazo zingaba ukushisa amanzi ngezinsuku ezibandayo ku.
Izithombe ezinyakazayo kanye kusihlwa ukuzijabulisa: umculo bukhoma, imincintiswano, imibukiso, izifundo Folk bedansa.
Uhambo kuya emadolobheni amakhulu saseKhupro (Nicosia, Ayia Napa), kanye ezidumile endaweni engenabantu kulesi siqhingi.
Paid amanzi ipaki kokubili abadala kanye nezingane. Izivakashi zithole isaphulelo eningi ekuhambeleni.
A beach ayimfihlo amathawula mahhala futhi ilanga loungers. Ukuze imali izivakashi zingathola ukuqasha impahla amanzi ezemidlalo-scuba diving.
Playground (etafuleni kanye ithenisi zakudala, imicibisholo, amabhiliyade). Igumbi Ukufaneleka nge siqu yesimanje imishini yayo ukuqina.
Spa, ukunikela izivakashi namasevisi afana ikhokhwe kuhlanganise massage, Jacuzzi, igumbi umusi, sauna.
Nobuhle salon, okuyinto uzokunika ephelele kusihlwa ukubukeka. Futhi abalungisa izinwele abafanelekayo ukusebenza lapha.
Casino slot machines abadala futhi ingaphakathi isiqophi imidlalo izingane.
Nethezeka ehhotela nezingane
Ukuze izivakashi abasebasha ehhotela "Anastasia" (Cyprus) uye wabuye walungisa ezihlukahlukene zokuzijabulisa. Phakathi kwabo - futhi zezingane mini-pool, kanye imidlalo Igumbi, futhi Uhlelo ukuzijabulisa. Abazali bangaba njalo ukushiya ingane club yezingane, lapho Animators kuzothatha imidlalo yayo ezithakazelisayo, ukuthuthukisa izinhlelo kanye imincintiswano. Chitha isikhathi ngaphandle izingane zidlala ku lokudlala, ifakwe jika yesimanje. Ukuze izingane ezindadlana kukhona igumbi TV futhi indawo isiqophi imidlalo.
izimo ukhululekile ayatholakala futhi imindeni enezingane ezincane. Phezu kokuthi ingane isikhathi esingaba iminyaka emibili wawuba ihhotela lamahhala umphelelisi imbeleko yezingane. A yokudlela ye-lula izingane ukusuthisa babe izihlalo okusezingeni eliphezulu. Shaja izivakashi Ungahlala ukuqasha umhlengikazi ubusuku nemini, okuzokwenza ahlale nengane yabo, njengoba nje, isibonelo, ukuya ku-hambo.
Ngaphambi kokukhetha amavawusha kuwufanele Izibuyekezo kokufunda mayelana ehhotela "Anastasia" eKhupro. Minyaka yonke, izivakashi eziningi Russian eyeka lapha. Nazi izinzuzo ehhotela, bona wazi:
sokudla okumnandi, okuyizinto ikakhulukazi abathandi inyama kanye kwasolwandle;
ukhonza nemimoya emihle, kuhlanganise ezihlukahlukene ubhiya, okwenza cocktail okumnandi;
a yokubhukuda ezinkulu, kukhona njalo isikhala kwi ilanga ithala, futhi kukhona njalo sunbeds iyatholakala futhi emphemeni izihlalo;
friendly futhi nobudlelwano abasebenzi, oqonda isiRashiya, kanye esihlobene izingane;
ezinhle amanzi ipaki esizeni, eziningi amaslayidi ezahlukene kubantu kwanoma iyiphi ukuphakama futhi ukwakha, kanye nabatakuli ngempela ukubukela abantu.
imicabango yabantu Negative mayelana izivakashi ehhotela
Kodwa, uma ucabanga ehhotela "Anastasia" (Protaras, Cyprus) Izibuyekezo okuyinto ikakhulukazi omuhle, kuhle ukucabangela nemibono engakhi izivakashi. Izivakashi uqaphele bokwenza lokhu okulandelayo:
ekufikeni zezivakashi bangasiduduza ferry kwezinsuku ezimbalwa kwenye ehhotela, ngoba "Anastasia" akuyona imibhede ngokwanele;
Ukudla okuyisidina ehlanganisa ngokuyisisekelo ukudla okusheshayo;
umsindo kakhulu kusihlwa ngenxa animation kanye yokudlela ngomculo bukhoma;
abampofu lolwandle ayimfihlo unomphela isihlabathi ezimanzi, ukuze ube ukuya angomakhelwane;
zonke izithombe Kunenkolelo ngesiNgisi kuphela;
kancane kakhulu futhi internet ezibizayo;
zonke enethiwekhi kule nguqulo yesiNgisi sampula kulelo hhotela, ngakho kufanele uthenge adapters esitolo.
Kufanele ngikhetha "Anastasia"?
Ngokukhetha leli hhotela abanye, kuwufanele wazi ukuthi it is more yenzelwe izivakashi ngesiNgisi. Afake lapha endaweni yokuqala, kanye yonke imisebenzi eqhutshwa ngesiNgisi. Kodwa abasebenzi uyaqonda isiRashiya futhi kungasiza ngisho ukwazi ukuzixazululela izinkinga zakho. Kufanele kukhunjulwe ukuthi le ndawo lwesikhashana kwelinye ihhotela - kuwumkhuba ovamile eKhupro. Ihhotela "Anastasia 4 * 'izibuyekezo uthi umthetho awusiwo okuhlukile.
Naphezu kwalezi zimo ezinhle amaphutha, "Anastasia" uphelele iholidi lomkhaya ethule, imibhangqwana amadala, futhi amaqembu amancane abangane.
"Side Sural Saray" - iparele zokubhuka eTurkey
Larissa Park Hotel 3 * (Turkey, Kemer) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
I-facade metal cassettes: ubukhulu, i-montage, isithombe
Ukwelashwa Myopia kanye izimbangela zezifo
Orange sauce for izitsha ezahlukene
Inkomo yasendle: ukubukwa nezithombe
Indlela ukususa iphasiwedi kusuka kukhompyutha
Bando for amakhethini - hit isizini